I-China PACSystems RX3i Allen Bradley - Abahlinzeki - HuiTong Industry Company Limited google-site-verification=TXg1_WchYlMLB36tKPCkhY02HfKkkQfiMDCP-ksCfHM
Ikhaya > Imikhiqizo > Amapulatifomu Anobuhlakani be-GE > Ama-PACSystems RX3i
I-PACSystems RX3i yisizukulwane esisha sohlelo lokulawula okukhulu. Inemisebenzi yokulawula enamandla kakhulu kune-PLC yendabuko futhi yamukela isakhiwo esivulekile sokulawula. Ipulatifomu eyodwa yokulawula izinto eziningi, ngokushesha isebenzisa ikhambi, inokuthwala okukhulu kunayo yonke, futhi kulula ukuthuthukisa imishini yamanje.
I-PACSystems RX3i iyisango lakho kwi-Intanethi Yezimboni. Zonke izinqubo zokukhiqiza zingaqashwa futhi zilawulwe ngesikhathi sangempela kusuka noma kuphi emhlabeni. Faka esikhundleni sokuphazamiseka okuhleliwe kokulungiswa kokulungiswa kwesikhathi esizayo ukuze uvikele isikhathi esingahlelwanga futhi esibuhlungu.
I-PACSystems RX3i ingaphezu nje kwesikhulumi se-PLC esinamandla futhi esinamandla. Ibuye ibe nezici zokuguqula izinguquko ezikwenza ukhetheke umncintiswano.
I-PACSystems Rx3i iqukethe zonke izici ozifunayo kusuka ku-PLC esezingeni lomhlaba.
Ipulatifomu yokulawula eyisihluthulelo yePACSystems RX3i (Logic, Motion, HMI, Ukulawulwa kwenqubo kanye nokutholakala okuphezulu okusekelwe ku-Emerson's Reflective Memory Technology) kuthuthukisa ukusebenza kohlelo nokuguquguquka
Nge-GE Intelligent Platforms PACSystems RX3i amakhono akho wokuhlaziya awanamkhawulo futhi kungenziwa ngokwezifiso kusetshenziswa amathuluzi avulekile nezinsizakalo zesoftware plugable - ukuvumela ukuthi unciphise isikhathi sokuphumula, wenze ngcono ukusebenza, kanye nezinguquko zemakethe ezisizayo ngokusebenza okuhle.
I-HTI inikeza izinhlobo ezahlukahlukene ze-PACSystems RX3i IC69 ongakhetha kuzo. Uyemukelwa ukusithumela nge-imeyili nganoma yisiphi isikhathi. Sizokucaphuna ngomkhiqizo osezingeni eliphakeme ngenani elithandekayo.
Ama-PACSystems RX3i I-Allen Bradley ethengisa, yokusungula enkulu esitokisini, inikezwa yiHiTong Industry Co; I-Ltd.Ungabe ufuna amanani aphansi amanani we-automation Ama-PACSystems RX3i brandation nge-quotation? Singakunikeza ama-PLCs, ama-Powerflex Drives, ama-VFD, abalawuli beServo, Panelviews.